စျေးပေါသော Rotary Drum NPK ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာ Granulator စက်ပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံ။ | YiZheng
Rotary Drum ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာ Granulator စက်ကဘာလဲ?
Rotary စည်ဒြပ်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ Granulator ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အဓိကပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလုပ်၏အဓိက mode မှာစိုစွတ်သော granulation နှင့်အတူစာလုံးပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရေသို့မဟုတ်ရေနွေးငွေ့ပမာဏအချို့မှတစ်ဆင့်အခြေခံဓာတ်မြေသြဇာသည်စိုထိုင်းဆကိုအပြီးအပြည့်အဝဓာတုဗေဒဓာတ်ပြုပြီးစိုထိုင်းဆဖြစ်ပြီးနောက်။ အချို့သောအရည်အဆင့်များတွင်စည်၏လှည့်လည်သွားလာမှုကိုဘောလုံးထဲသို့ပစ္စည်း၏ဖိအားပေးရန်ပြုလုပ်သည်။ တစ်ခုလုံး NPK ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာ granulation ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း ပါဝင်ပါသည်:
Rotary Drum ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာ Granulator ၏ဖွဲ့စည်းပုံ
၁) ကွင်းခတ်အပိုင်း - ခန္ဓာကိုယ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးသည်ကွင်းခတ်ခြင်းဖြင့်ထောက်ပံ့မှု၊ အားသည်သာလွန်သည်။ ထို့ကြောင့်စက်၏ဘီးအစိတ်အပိုင်းများကိုကာဗွန်သံမဏိပြားများတွင် အသုံးပြု၍ ချန်နယ်မှဂဟေဆော်ပြီး၊ တင်းကြပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်အထူးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များမှတစ်ဆင့်စက်၏အသုံးပြုမှုရည်ရွယ်ချက်ကိုရောက်ရှိခဲ့သည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာဂရုစိုက်ခြင်း၏စင်များပေါ်တွင်ပုံသေတပ်ဆင်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ခန္ဓာကိုယ်အလှည့်သည်ပိုမိုပွတ်တိုက်မှုရှိလိမ့်မည်။ စက်ကိုအခြားစက်ကိုဘီး၏လေးဘက်တစ်ချက်ကိုဆွဲထားသောချိတ်နှင့်လွယ်ကူစွာ တင်၍ သယ်ဆောင်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။
2) ဂီယာအစိတ်အပိုင်း: တစ်ခုလုံးကို granulator drive ကိုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏အလုပ်တစ်ခုလုံးကိုဒီလိုင်းရှိသည်များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဂီယာဘောင်ကိုအရည်အသွေးမြင့်မားသောသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးတင်းကျပ်သောအရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဂီယာဘောင်တွင်တပ်ဆင်ခြင်းအဓိကမော်တာနှင့် reducer တို့တွင် ISO National ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့်ထုတ်ကုန်များ၊ မော်တာသည်စက်သီး၊ V- ခါးပတ်၊ ၀ ိသေနသို့ဂီယာကိုထုတ်ပေးသည်။ သို့မှသာခန္တာကိုယ်ကအလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ဗိုင်းလိပ်တံတွင်ပါ ၀ င်သော reducer ကိုမောင်းနှင်သည့်အခါနိုင်လွန်အသုံးပြုခြင်းသည် connector phase bite Transfer drive ကိုချွတ်လိုက်သည်။
၃) ကြီးမားသောဂီယာ - ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားပြီးဂီယာအုံသားသွားအံသွား၊ ဆန့်ကျင်ဘက်ကခန္တာကိုယ်ကိုမောင်းနှင်သည်၊ အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးခံနိုင်ရည်ရှိသောပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်း၊ စက်သည်သက်တမ်းရှည်စေရန်။
၄) roller - ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုထောက်ပံ့ရန်ကိုယ်ခန္ဓာနှစ်ဖက်စလုံးတွင်တပ်ဆင်ထားသည်။
၅) ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်း - granulator တစ်ခုလုံးသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသောကာဗွန်သံမဏိပြားများနှင့်ပြုလုပ်ထားသောအထူးရော်ဘာအစိုင်အခဲသို့မဟုတ်အက်ဆစ်ခံနိုင်ရည်ရှိသောသံမဏိအစရှိသည့်အကျိတ်မှအလိုအလျောက်အမာရွတ်များကိုပြုလုပ်သည်။ ရိုးရာခြစ်စက်ကိုဖျက်သိမ်းပါ။ တိကျသောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်အသုံးပြုသောစက်၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုရရှိရန်အထူးလုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်ချက်များမှတဆင့်ပြုလုပ်ပါ။
Rotary စည်ဒြပ်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ Granulator ၏အင်္ဂါရပ်
၁။ အမှုန့် ၇၀% အထိမြင့်မားသည်။ အမြတ်အနည်းငယ်မျှသာပြန်လည်ရရှိပြီးထုတ်ကုန်မှုန်အမှုန်အရွယ်အစားသေးငယ်။ ပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်သည်။
၂။ ရေနွေးငွေ့အပူထဲသို့သွင်းပါ၊ ပစ္စည်းအပူချိန်ကိုမြှင့်တင်ပါ၊ ရေနည်းပြီးနောက်ဘောလုံးထဲသို့ပစ္စည်းထဲသို့ခြောက်သွေ့အောင်လုပ်ပါ။
၃။ နံရံအတွက်ရော်ဘာအင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်များဖြင့်ကုန်ကြမ်းများကိုကပ်ရန်မလွယ်ကူပါ၊ ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးတွင်ပါ ၀ င်သည်။
4. အကြီးစားထုတ်လုပ်မှု၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပြီး၊
NPK ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာ Rotary Drum Granulation ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအကြောင်းပိုမိုသိရှိပါစေ
ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာစည် granulation အားဖြင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ပေါင်းစပ်သောဓာတ်မြေသြဇာသည်ကောက်ပဲသီးနှံများအတွက်အာဟာရဓာတ်များကိုတစ်ကျော့ပြန်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ကောက်ပဲသီးနှံများအတွက်လိုအပ်သောနိုက်ထရိုဂျင်၊ ဖော့စဖရပ်စ်၊ ပိုတက်စီယမ်နှင့်အခြားဓာတုပစ္စည်းများဖြစ်သောကောက်ပဲသီးနှံများအတွက်လိုအပ်သောအဓိကအာဟာရများဖြစ်သော (N, P, K နှင့်အခြားသဲလွန်စဒြပ်စင်များ) ကိုဓာတုဗေဒထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ မြေဆီလွှာ။ မြေဆီလွှာမှအာဟာရများကိုစုပ်ယူပါ။ လုပ်ငန်းစဉ်၏နိယာမတွင်နိုက်ထရိုဂျင်၊ ဖော့စဖရပ်၊ ပိုတက်စီယမ်အမှုန်များ၊ အမ်မီနီယမ်ဆာလဖိတ်အမှုန်များ၊ ကယ်လစီယမ်ဟိုက်ဒရိုဖော့စဖိတ်အမှုန်များနှင့်ရောနှောထားသောဓာတ်မြေသြဇာများပါ ၀ င်သည်။ အမျိုးမျိုးသောအမှုန့်ကုန်ကြမ်းများကိုအမှုန့်များသောဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ရန်အခြောက်၊ အခြောက်နှင့်အအေးပေးသည်။ ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏နည်းပညာဖြစ်စဉ်ကိုကုန်ကြမ်းပစ္စည်း၊ ကုန်ကြမ်းရောနှောခြင်း၊ ကုန်ကြမ်းအမှုန့်၊ အမှုန်ခြောက်ခြင်း၊ အမှုန်အအေး၊ အမှုန်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊
Rotary Drum ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာ Granulator ဗီဒီယိုပြ
Rotary Drum ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာ Granulator မော်ဒယ်ရွေးချယ်ရေး
ရှေ့သို့ နဂိုအမျိုးအစားအော်ဂဲနစ်မြေသြဇာ Granulator
နောက်တစ်ခု: Disc အော်ဂဲနစ် & ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာ Granulator